Soo dejisan BullGuard Premium Protection 20.0.375.1 – Vessoft
WindowsAmnigaDifaac guudBullGuard Premium Protection
Bogga rasmiga ah: BullGuard Premium Protection
BullGuard Premium Protection – qalab dhamaystiran oo ah qalab nabadgelyo ah oo ka ilaalin kara kombuyutarkaaga khatarta noocyada kala duwan. Mashiinka antivirus ee heerkulka badan leh wuxuu taageersan yahay amniga kombuyuutarka oo joogto ah iyadoo la eegayo nidaamka faylka, raadinta dabeecadaha software ee shaki, hubinta emails iyo falanqaynta taraafikada webka ee asalka. BullGuard Premium Protection waxay isku dayayaan weerarrada phishing, waxay ka ilaaliyaan shabakadaha khatarta ah waxayna calaamadeeyaan xidhiidhada shakiga leh calaamadda digniinta. Dab-damis la dhisay ayaa go’aaminaya shuruucda gelitaanka shabakadda ee barnaamijka iyo xannibyada isku-dayga ah ee aan loo fasirin inay isku xiraan kombiyuutarka iyadoo loo marayo internetka. Ilaalinta BullGuard Premium wuxuu qiimeeyaa amniga shabakadda guryaha ee dadka isticmaala iyada oo lagu ogaanayo dhammaan qalabka ku xiran iyo hubinta aaladahaas loogu talagalay infekshanka. Jadwalka nabdoonaanta ayaa ka hortagaya in uu ka faa’iidaysto aagagga ammaanka ee nidaamka iyo barnaamijka. Ilaalinta BullGuard Premium waxaa kale oo ay taageertaa xakameynta waalidnimada, xoojinta ciyaarta, xajinta daruuraha, qalabka kombiyuutarka iyo difaaca aqoonsiga.
Antivirus, Faafin, Anti-Ransomware
Dab-damis ku dhisan
Raadinta shabakad nabdoon
Qiimaynta amniga shabakadda guriga
Soo dejisan BullGuard Premium Protection
Faallo ku saabsan BullGuard Premium Protection
BullGuard Premium Protection Xirfadaha la xiriira